Uhlobo olusha lwe-Loculinux, i-linux yezindawo zokudlela ezinhle ze-cyber | Kusuka kuLinux
Ekugcineni Uhlobo lwe-Loculinux 1.1 lufikile ngakho konke ukulungiswa okulungisiwe kusuka kwangaphambilini. Izinguqulo ezi-2 zidaliwe, iKlayenti neServer, ukusebenzisa i-LocuLinux eziteshini zokusebenza, kufanele ufake iklayenti kulowo nalowo kubo nakukhompyutha ezozilawula, iseva.
Uhlelo olusetshenziselwe ukulawula izikhundla yilona oluthuthuke kakhulu engilubonile kuze kube manje, luvumela amanani entengo ngehora, ngokukhokha kusengaphambili, ngamahora, ngomsebenzisi, njll. Ivumela Ukuvala iseshini yesiteshi, Ukusiqalisa kabusha noma Ukucisha isiteshi, ngokuqondile esikhungweni sokulawula iseva se-LocuLinux.
Ngenxa yezinkinga zokuqina, inguqulo ishintshiwe ukusuka ku-9.10 kuye ku-9.04 ngawo wonke amaphakheji abuyekeziwe.
Ukusatshalaliswa kweLinux okususelwe ku-Ubuntu 9.04 okwenzelwe ukumboza imakethe esetshenziswayo yeLinux, okuyizitolo zezingcingo noma ezaziwa nangokuthi ama-cybercafes.
Inkinga yamanje yalolu hlobo lokusungulwa ukuthi ngenxa yokutshalwa kwemali kokuqala ekuthengeni amakhompyutha, ilayisense yesoftware ezofakwa kufanele ingezwe, okusho ukuthi, lokho okufakiwe kufanele kube semthethweni ngokuphelele ngoba kuyinsizakalo enikezwa umphakathi jikelele.
Izindleko zokulayisensa izinhlelo zokusebenza ezisetshenziswa kakhulu ziphakamisa izindleko zokuthenga amakhompyutha futhi zidala ukuthi lolu hlobo lwesoftware lufakwe ngokungemthetho.
Yilapho i-LOCULINUX ingena khona, njengoba kungukusatshalaliswa kwe-Linux, ayinazindleko kwilayisense kwikhompyutha ngayinye noma ngenombolo ephelele yabasebenzisi, ngoba isuselwa kwilayisense le-GNU elisho ngamafuphi ukuthi singasabalalisa ngokukhululekile isoftware noma ngisho ukuyiguqula ngokubona kwethu.
I-LOCULINUX inazo zonke izinhlelo zokusebenza ezidingekayo ukuze ikwazi ukuzifaka kulolu hlobo lwesikhungo, kusuka ku-Office Automation Programs (Word Processor, Spreadsheets, Presentations), Instant Messaging, njll.
Le nguqulo yokuqala yeLOCULINUX, ukufakwa kwayo kulula kakhulu, kungenziwa ngqo kusuka kwi-LIVE DVD noma kufakwe kwi-hard disk yekhompyutha.
Inezindawo ezimbili zokubulawa kwezinhlelo ezenzelwe ipulatifomu yeWin Os, iWine ne-PlayOnLinux, eyokugcina isivumela ukuthi sisebenzise imidlalo noma amademo amaningi wezohwebo ngqo kusuka ku-LOCULINUX yethu.
Ikhasi elisemthethweni | loculinux.com
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Uhlobo olusha lwe-Loculinux, i-linux yezindawo zokudlela ezinhle ze-cyber
Lungiselela ukhiye weWindows kuLinux